Onye Ogbi Mbụ Batara n’Ọgbakọ | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
A MỤRỤ YA N’AFỌ 1960
E MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1982
ONYE Ọ BỤ José malitere ịbịa ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova mgbe ọ dị obere. Otú ụmụnna anyị si hụ ya n’anya mere ka ọ nọgide na-abịa, n’agbanyeghị na e nweghị onye n’ime ha ma asụsụ ndị ogbi.
NTỊ chiri m mgbe m dị obere. N’ihi ya, m gara mụọ asụsụ ndị ogbi n’ụlọ akwụkwọ ndị ogbi. Mgbe m dị afọ iri na otu, otu ezinụlọ bụ́ Ndịàmà Jehova gwara m ka m soro ha gaa ọmụmụ ihe. Nke ahụ bụ nke mbụ m na-aga ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova. N’agbanyeghị na aghọtaghị m ihe e kwuru, otú ha si nabata m mere ka m bịawazie. Ọtụtụ n’ime ha kpọrọ m ka m bịa rie nri n’ụlọ ha, kpọọkwa m ka m soro ha mee ihe ndị ọzọ.
Aghọrọ m onye nkwusa n’afọ 1982, mee baptizim ná ngwụcha afọ ahụ. N’afọ 1984, m lụrụ otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Eva. Ọ bụkwa onye ogbi. Ọ bụ eziokwu na anyị aghọtachaghị ihe ụfọdụ Baịbụl na-akụzi, ma anyị ma na anyị nọ n’ọgbakọ Jehova. Ihe anyị ji mata bụ otú ha si hụ ibe ha n’anya, bụ́kwanụ ihe Baịbụl kwuru e ji ama ndị na-eso ụzọ Jizọs. Obi dị anyị ụtọ na anyị nọ n’ọgbakọ Jehova.—Jọn 13:35.
N’afọ 1992, e bidoro kụziwere ụfọdụ ụmụnna Asụsụ Ndị Ogbi nke Amerịka. Obere oge, ụmụnna ndị a bidoro chọwa ndị ogbi ma na-ezi ha ozi ọma. N’afọ 1994, alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Dọminikan Ripọblik si Puweto Riko kpọta otu di na nwunye ka ha bịa na Betel kụziere ụmụnna iri abụọ na ise asụsụ ndị ogbi. Nke a mere ka izi ndị ogbi ozi ọma biri ọkụ.
Ná ngwụcha afọ ahụ, mụ na nwunye m bidoro iso ìgwè e hiwere ọhụrụ na-eji asụsụ ndị ogbi amụ ihe na-amụ ihe. Ihe Baịbụl na-ekwu bịara na-edokwu anyị anya mgbe anyị bidoro ịga ọmụmụ ihe n’asụsụ ndị ogbi. Otu n’ime ihe ndị ahụ bụ na Setan kwuru na otú Jehova si achị adịghị mma. Ọzọ abụrụ otú Chineke ga-esi jiri Alaeze Mesaya mezuo nzube ya.
N’abalị mbụ n’ọnwa Disemba, afọ 1995, e hiwere ọgbakọ na-eji Asụsụ Ndị Ogbi nke Amerịka amụ ihe na Santo Domingo nakwa na Santiago. N’Ọgọst 2014, e nwere ọgbakọ iri abụọ na isii na ìgwè iri na asatọ na-eji asụsụ ndị ogbi amụ ihe na Dọminikan Ripọblik.
Mụ na nwunye m Eva kụziiri ụmụ anyị atọ asụsụ ndị ogbi. Ọ bụkwa asụsụ ha kacha asụ. Nwa mbụ anyị aha ya bụ Éber na-eje ozi n’alaka ụlọ ọrụ dị n’Amerịka. O so na-asụgharị asụsụ ndị ogbi. M bụ ohu na-eje ozi n’ọgbakọ. Nwunye m kwa bụ ọsụ ụzọ oge niile.
Otú ọgbakọ ndị na-eji Asụsụ Ndị Ogbi nke Amerịka amụ ihe si mụbaa malite n’afọ 1995 ruo n’afọ 2014
Ọgbakọ 26, na ìgwè 18